सधैका लागि अधुरै रह्यो बुहारी भित्राउने सुशान्तको बुबाको सपना, बेहोस अवस्थामा छन् उनि ! – live 60media
सधैका लागि अधुरै रह्यो बुहारी भित्राउने सुशान्तको बुबाको सपना, बेहोस अवस्थामा छन् उनि !
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत अब हामीबीच रहेनन् यो खबर जतिले सुने सबै चकित परे । भारतीय टिभी सिरियल्समा आफ्नो अभिनयको जादु देखाएपछि फिल्ममार्फत् मानिसहरुको मनमा घर बनाएका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत शरीर आइतबार उनको घरमा भेटियो ।
मुम्बईको बान्द्रा इलाकामा उनी भाडाको फ्ल्याटमा बस्दथे, त्यहि फ्ल्याटबाट उनको मृत शरीर बाहिर निकालियो । प्रहरीका अनुसार सुशान्तले देहत्याग गरेका छन् । तर यसको कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, उनी पछिल्लो ६ महिनादेखि डि प्रेशनसँग जुधिरहेको बताइन्छ ।
उनी उक्त फ्ल्याटमा एक्लै बस्दैनथे । उनीसँग उनका क्रिएटिभ म्यानेजर, उनका एक साथी र घरेलु सहयोगी बस्दथे । उक्त घरमा बस्ने कुनै पनि सदस्यले आइतबार बिहान अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको अन्तिम बिहान होला भनेर सोचेका थिएनन् । सुशान्तको मृ त्युको खबर सार्वजनिक हुने बित्तिकै सोसल मिडियामा प्रशंसकले आफ्नो निराशा व्यक्त गरेका छन् । मानिसहरु हिन्दी सिनेमाका उदीयमान कलाकारको अचानक मृ त्यु हुँदा हैरान छन् ।
सानो पर्दाबाट करियरको सुरुवात गर्ने सुशान्तका थुप्रै सपना थिए । यहि सपनाले सुशान्तलाई फिल्ममा पनि ल्यायो । सुशान्तले धोनी, काए पो छे, पीके, केदारनाथ, छिछोरेजस्ता थुप्रै फिल्ममा काम गरेका थिए । आइतबार आ त्मह त्या गरेका बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंहले पाँच दिन पहिले मात्र मलहिडामा रहेको आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यसँग लामो समय फोनमा कुराकानी गरेका थिए ।
उनी पछिल्लो समय मोडल रिहा चक्रवतीसँग सम्बन्धमा रहेका थिए । उनीहरु बीचमा बिहेको कुरा चलेकाे हल्ला भएपनि उनीहरुले औपचारिक रुपमा उक्त्त कुरा खुलाएका थिएन्न । बलिउडका पापाराजीले केहि समय अगाडी सुशान्त र रिहालाई सँगै भेटेको थियो । तर सुशान्तले केहि प्रतिक्रिया दिन मानेन्न र गाडीमा चढेर आफ्नो घर गएका थिए । उनका अंकलका छोरा पन्ना सिंहका अनुसार उनले त्यो फोनमा सबैलाई घरमा आएर बद्रीनाथ लिएर जाने बताएका थिए ।
उनले ठूलीआमालाई पनि यो वाचा गरेका थिए । आइतबार उनकी ठूली आमाले यो समाचार थाहा पाएपछि बारम्बार आफूले ठूलो सपना गुमाएको बताउँदै रोएकी थिइन् । पन्ना सिंहका अनुसार सुशान्तको विवाह यही नोभेम्बरमा हुँदै थियो । बिवाहको कुरा आएपछि सुशान्तको परिवार खुसि थियो र साथै बिस्तारै तयारीमा जुट्ने तरखरमा थिए । अचानक यस्तो दुखद खबर सुनेपछि सुशान्तका पिता बेहोस भएर ढलेका थिए भने उनलाई ४ जना छोरीहरुले सम्हालेका थिए । छोराको बिहे गरि बुहारी भित्र्याउन खुसि भएका पिताको सपनामा अब सधैका लागि त्यो सपना अब अधुरो रहेको छ ।
← छाङ्रुमा बिओपी सञ्चालनमा आएपछि, पलायन स्थानीय गाउँ फर्किन थाले
घटना हुनुभन्दा १ दिन अघि गर्लफ्रेन्डलाई लिएर कहाँ गएका थिए सुशान्त ? उनीहरुको सम्बन्ध कस्तो थियो ? आत्महत्या पछि खुल्यो बल्ल यो कुरा ! →